Addis Abeba & Nairobi oo isku haysta DAKHLI balaayiin ah oo ay Muqdisho heli lahayd (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Addis Abeba & Nairobi oo isku haysta DAKHLI balaayiin ah oo ay...
Addis Abeba & Nairobi oo isku haysta DAKHLI balaayiin ah oo ay Muqdisho heli lahayd (Waa maxay?)
(Addis Abeba) 05 Maajo 2019 – Soomaalida u shaqaysa QM iyo Hay’aadka Caalamiga ah iyo hay’adaha Somalia ka shaqeeya laftooda, ayaa beryahan Kenya ka wareegaya iyagoo door bidaya Itoobiya oo arrimo dhowr ah ku dhaanta Kenya.
Waxyaabaha ay Itoobiya oo is furfuraysa sameeysay waxaa ka mid ah Fiisaha oo lagu siinayo marka aad garoonka kasoo degto, duullimaad toos ah, khash-khashaad la’aan, nolosha oo ka jaban iwm.
War aan la xaqiijin karin oo aannu helnay ayaa sheegaya in QM ay rubaca hore ee sanadkan 2019 kaliya shirar ay Itoobiya ku qabatay ku bixisay $1.2M oo doollar.
Hay’aadka caalamiga ah sida QM, IMF, World Bank iyo INGO-yada caalamiga ah ayaa barnaamijyo badan oo ay lahaayeen u wareejiyay dhanka Itoobiya oo sida la yiri ugu xilanayaan soo dhowayn wanaagsan, safar toosan iyo adeeg hufan.
Dhanka Kenya oo markii hore ay door bidi jireen hay’aadkan maadaama ay Itoobiya ahayd dal xirxiran ayuu Fiisuhu qaataa in ka badan 3 bilood, waxaa la socda lacago badan oo laaluush ah iyo garoomadooda oo dadka lagu khash-khashaado.
Tan iyo xilliyadii burburka ayay dalal badan oo deris la ah Somalia waxay ka macaashayeen burburka iyo amaan darrida oo sababay la’aanta adeegyo caalami ah oo ay Somalia bixiso, waloow ay sanadihii dambe dhowr hay’adood dalka soo degeen.
Arrintan ayaa sidoo kale baraarug u noqon kara Soomaaliya oo u baahan inay amaanka sugaan marka hore, marka xigana ay maamulkooda hufaan si ay usoo jiitaan hay’adaha caalamiga ah oo ay fursadahan wax uga helaan.
Previous articleUgu yaraan 13 qof oo ay carruuri ku jirto oo ku dhintay dayuurad hawada dab ku qabsaday (Daawo iyadoo holcaysa oo ay dadku ka boodayaan)
Next article37 qof unbaa ka badbaaddey 78 qof oo dayuuraddu siddey! (Wararkii ugu dambeeyay)